नेताहरु धनी र जनता गरिब हुने यस्तो गणतन्त्र चाहिएको थिएन, राजाको ठाउँमा रजौटाहरु चाहिएको थिएन – Halkhabar kura
१० बैशाख २०७७, बुधबार १२:४५
नेताहरु धनी र जनता गरिब हुने यस्तो गणतन्त्र चाहिएको थिएन, राजाको ठाउँमा रजौटाहरु चाहिएको थिएन
पुर्ब महाराज तपाईं र मेरो निवास नजिकै छ तर भेट हुँदैन। म कहिले काहीं घरको छतबाट तपाईंलाई देख्छु र के छ हालखबर भनेर सोध्नुपर्ला भनेर छतमा उक्लिन्छु पनि ।तपाईले मलाई टीभीमा देखेर चिन्नु भाकै छ होला भन्ने भ्रममा छु ।
मैले त २००७ सालदेखिको इतिहासमा तपाईलाई चिनेकै छु, मात्र तपाईले गद्दी छाडेको दिन तपाईको गद्दीमा बसेर सेल्फी खिच्ने पत्रकारको भिडमा म थिइन । मलाई तपाइको साच्चै माया लाग्छ ।
तपाईलाई ४ बर्षमा राजा बनाइयो, तपाईलाई थाहा नै थिएन किन बनाइयो,किन हटाइयो ?
कतिले दाइमारा भनेर चर्चा गरे कतिले राजा ? तपाईले देश चलाउने मौका पाउँदा मन चौधरीको जस्तो ब्यापारी, अनि इच्छा बाबू महेन्द्रको जस्तो महत्त्वकाँक्षी भएर चिप्लिनु भो । कम्तिमा दाजुको चार आना जमिन आफ्नो नाममा ल्याउने लोभ नगरी देश नै मेरो सम्पती अनि देशबासीनै मेरा सन्तान भनेको भए तात्कालिन सात दल बदामका ग्राहक हुन्थे, अनि माओवादी श्रीलंकाका तमिल । तर उद्दण्ड भनिएका पुत्र पारसको मोह धृतराष्ट्रका लागि दुर्योधन जस्तो भो ।
पृय पुर्ब राजा, हिजै ब्यापारीबाट राजा बन्देको भए हामीलाई यस्तो नेता धनी र जनता गरिब हुने गणतन्त्र चाहिएको नै थिएन । हामीलाई एउटा राजाको ठाउँमा रजौटा चाहिएको नै थिएन ।
हामी यी दर्जनौलाई अर्बौं दिनु सट्टा तपाईलाई खुशी खुसी महिनाको चार करोड दिन्थ्यौ । आज तपाईले कोरोनाले रोइरहेका गरिबलाई २ करोड दिने भनेर फेरि नेता भन्दा माथी हुनु भाको छ। मलाई मैले भात खुवाएको आज भुजा खाने, हिजो चप्पलको तुना फेर्ने आज बतननै फेर्ने, हिजो जनै नलगाउने आज हिराको हार लगाउने, हिजो हिड्दा खुट्टा फुट्ने आज ८४ ब्यन्जन नपचेर भुँडी फुट्ने नेता भन्दा तपाईं प्यारो लाग्न थाल्यो पुर्ब राजा ।
-पत्रकार राजेन्द्र बानियाँको फेसबुकबाट
Previous जनतालाई पिडा दिईरहने अहिलेका नेताहरुलाई जरैसहित फालौं, देश जोगाऔं !
Next यी देवीको आराधना गर्दा २२३ वर्ष अघि काठमाडौंमा यसरी महामारीको अन्त्य भएको थियो